Inona no Tsapanao Rehefa Krismasy?
“Mety ho somebiseby toy ny olon-drehetra ianao rehefa fety. Lasa adidy tsy maintsy atao ny fombafomba amin’ny fety. Zara raha manam-potoana iarahana amin’ny havana sy ny namana ianao satria be atao loatra. Tsy faly akory ianao indraindray fa vao mainka miady saina.”—BRAD HENRY, GOVERNORA TALOHA TANY OKLAHOMA, ETAZONIA, 23 DESAMBRA 2008.
MANENTANA ny olona hifety ny hira sy ny filma ary ny fandaharana amin’ny tele rehefa akaiky ny Krismasy. Araka ny hevitrao, iza amin’ireto no tena tokony hoeritreretin’ny olona hatao rehefa Krismasy?
Mahatsiaro an’i Jesosy Kristy
Manampy ny sahirana
Hita amin’ny tenin’i Brad Henry, etsy ankavia, fa sarotra amin’ny olona ny mahavita an’ireo rehefa Krismasy. Be atao loatra izy ireo ka matetika no sahiran-tsaina. Lasa fitadiavam-bola fotsiny koa ny Krismasy. Tsy afaka ny ho falifaly araka ny eritreretiny mihitsy àry ve ny olona?
Ampirisihin’ny Baiboly isika mba hahatsiaro an’i Jesosy Kristy, ho tia manome, hanampy ny sahirana, ary hiaraka amin’ny fianakaviantsika. Ampianariny hihavana amin’ny hafa koa isika. Tsy hitanisa ny antony tsy hanaovan’ny olona sasany Krismasy àry ny lahatsoratra manaraka, * fa hamaly an’ireto:
Inona no heverin’ny olona fa antony tokony hanaovana Krismasy?
Inona no olana mahatonga ny olona tsy hahatsapa ny zavatra tiany ho tsapa rehefa Krismasy?
Inona no toro lalan’ny Baiboly nanampy olona an-tapitrisany hahita zavatra tsara kokoa noho ny Krismasy?
^ feh. 10 Raha tianao ho fantatra ny antony tsy hankalazan’ny olona sasany Krismasy, dia vakio ny lahatsoratra hoe “Manontany ny Mpamaky”
Hizara Hizara Inona no Tsapanao Rehefa Krismasy?